कर्णाली डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २२ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कर्णाली डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २२ भदौ २०७५)
on: २२ भाद्र २०७५, शुक्रबार १०:१६ लगानी
कर्णाली डेभलपमेण्ट बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २२ भदौ २०७५)
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘ख’वर्गको राष्ट्रिय स्तरको इजाजत प्राप्त कर्णाली डेभलपमेण्ट बैङ्कले आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा रू. १ करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा २२ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आवमा बैङ्कले रू. १ करोड ३१ लाख नाफा कमाएको थियो । चौथो त्रैमासमा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी २ सय ३३ प्रतिशतले बढेर रू. ५० करोड २८ लाख पुगेको छ । बैङ्कले १ बराबर २ दशमलव २५ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेकाले चुक्तापूँजी बढेको हो । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. ३ करोड ९६ लाख छुट्याएको छ । बैङ्कले निक्षेपकर्ता, ऋणी, शेयरधनीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको सर्वोत्तम हित संरक्षण गर्दै सबै पक्षलाई लाभान्वित हुने गरी व्यवसाय विकास विस्तार गरेको छ । साथै, ३ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रधान कार्यालयसहित १५ ओटा शाखा कार्यालयमार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
असार मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू. २ अर्ब ४८ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. १ अर्ब १७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप २४ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी रू. ७ करोड ३० लाख, कर्मचारी खर्च रू. ३ करोड ५० लाख, अन्य सञ्चालन रू. ३ करोड ९० लाख र सञ्चालन नाफा रू. १ करोड ६० लाख रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति रू. ७ करोड ९४ लाख र अन्य सम्पत्ति रू. ११ करोड ७ लाख रहेको छ ।
बैङ्कले सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्थामा रू. ७२ लाख ५० हजार छुट्याएको छ । निष्क्रिय कर्जा ३ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीकोष पर्याप्तता २९ दशमलव ९१ प्रतिशत, पूँजी कोष लागत ७ दशमलव ३५ प्रतिशत र सीडी रेशियो ४८ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आवको चौथोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६ दशमलव ७६, तरलता अनुपात ६७ दशमलव ७६ प्रतिशत, मूल्य आम्दानी अनुपात २० दशमलव ५७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ७ दशमलव ८८ रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ५ रहेको छ । यो नेटवर्थभन्दा कमी रहेको हो ।
खरीद चाप : बैङ्कको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद २ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ८ हजार ५ सय ४ कित्ता शेयर खरीद र ४ हजार १ सय ९ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : बैङ्कको ५५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले बैङ्कको शेयर मूल्य बुलिस ट्रेण्डमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ । विश्वसनीयता भने सामान्य रहेको छ ।
आरएसआई : बैङ्कको ५५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (५० दशमलव २९ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : बैङ्कको ५५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन २ दशमलव २७ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुन्छ ।
मुभिङ एभरेज : बैङ्कको ५५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्य रेखाभन्दा माथि छ । हालको मूल्य रू. १ सय ५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई सस्तिएमा रू. १ सय १ मा टेवा पाउन सक्छ भने मूल्य महँगिएमा रू. १ सय ६ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।
कर्णाली डेभलपमेण्टको हकप्रद कारोबार योग्य
११ भाद्र २०७५, सोमबार ११:३३
कर्णालीको हकप्रद भर्न थप गरिएको अवधि बिहीवार सकिदै
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:१८
कर्णाली डेभलपमेण्टको मूल्य समायोजन
२० पुष २०७४, बिहीबार १३:३६
कर्णाली बैङ्कको जगेडा कोष १४ प्रतिशतले वृद्धि
४ मंसिर २०७४, सोमबार १६:५०